MIBVUNZO - Geneham Pharmaceutical Co, Ltd.
Chii chinonzi rosemary kubvisa? Zvakadii nezve antioxidative zvivakwa?
Mucherechedzo uyu unobva kuRosemary (Rosmarinus officinalis Linn.), Chirimwa chinowanikwa mumhuri chakakura muAlps kubvira panguva dzepakati, uye chave kuwanikwa mupasi rose. Rosemary yanga ichishandiswa kwezviuru zvemakore se spice inonaka, inochengetedza chikafu, mune zvekuzora uye zvigadzirwa zvebvudzi, uye semushonga wemakwenzi wehutano hwakasiyana siyana. Kusvika parizvino zvakadaro, chaiyo makemikari nzira dzakabatanidzwa mune zvadzo zvinobatsira zvakaramba zvisingazivikanwe.
Carnosic acid, Carnosol uye Rosmarinic acid ndiwo makomponi anonyanya kushandiswa erosemary mushoma anowanikwa aine simba reantioxidant, uye Carnosic acid inoonekwa seye chete antioxidant inogadzirisa mahara radicals kuburikidza neyakawandisa nzira yekukwira.
"Natural antioxidants haina hunyanzvi pane yekugadzira?"
Nhaurwa zhinji mumabhuku pamwe nezvidzidzo zvedu zvemukati zvinosimbisa kuti chokwadi rosemary antioxidants iri muzvishandiso zvakawanda inoshanda kupfuura vhitamini E (synthetic), BHA, BHT, TBHQ nevamwe. Pamusoro peizvozvo, rosemary antioxidants yakanyanya kupisa kupisa, uye mashandisiro ayo anoita kuti vatengi vachengete yakachena mavara pane zvigadzirwa zvavo uye hapana allergen nyaya.
Nei uchitora rosemary kubvisa?
Kune akawanda akanakisa antioxidants ayo anogona kudzivirira munhu kubva kune yemahara radical kukuvara. Nekudaro, iyo rosemary yakatorwa ine anopfuura gumi nemaviri antioxidants, uye inotsigira yakasimba kudzivirira kuzvirwere zvisingaperi, kusanganisira Alzheimer's, chimwe chezvirwere zvinotyisa kwazvo zvanhasi.
• Inopa dziviriro ine simba antioxidant
Inodzivirira maseru ehuropi kubva kune zvakajairika mhedzisiro yekukwegura
• Inogona kudzora kufambira mberi kwechirwere cheAlzheimer
• Inodzivirira masero kubva kuma carcinogen
• Misa kukura kwemasero egomarara
• Inobatsira kunyaradza zviratidzo zvekurwara, kunyanya kuguruva mite
• Kuvandudza potency yevhitamini E
• Chengetedza huwandu hweropa hwakanaka
• Kupisa kwakanyanya Kunogara Antioxidant
Chii chinoita kuti rosemary dhonza ive yakakosha?
Antioxidants akave akaoneswa kuti atore mahara radicals, asi kwete ese antioxidants akaenzana. Muzviitiko zvakawanda, kana antioxidant yadzora rusununguko rusununguko, haisisina basa se antioxidant nekuti inova inert komputa. Kana zvakatonyanya, inova yemahara radical pachayo.
Ndipo panowanikwa rosemary yakasiyana zvakanyanya. Iine hupenyu hwakareba hurefu hwe antioxidant chiitiko. Kwete izvozvo chete, ine akawanda antioxidants, anosanganisira Carnosic acid, imwe chete antioxidants iyo inokanganisa mahara radicals kuburikidza neye multilevel cascade nzira.
Mulberry Leaf Inobvisa 1-Deoxynojirimycin inoshanda sei?
1-Deoxynojirimycin (DNJ) iri mhando yealkaloid inowanikwa muMulberry mashizha nemidzi yemakwati. DNJ inogamuchirwa kuve nemhedzisiro yekuchengetedza hutano hweropa glucose level, Antiviral chiitiko uye kubatsira kugadzirisa ganda metabolism uye kunatsa ganda.
Kutsvagurudza kunoratidza kuti DNJ payakapinda mumuviri, zvinokanganisa zviito zvekudzivirira kuwora starch neshuga ne sucrase, maltase, α-Glucosidase, α-amylase enzyme, nekudaro kuti ideredze zvakanyanya kuwedzerwa kweshuga yemuviri, uye chengeta iyo glucose ive yakawanda yakatsiga isina shanduko yekudya. Uye zvakare, DNJ inobatsira mukubviswa kweiyo glucose modification maitiro eHIV membrane glycoprotein. Zvichakadaro, kuunganidzwa kweanokurumidza glycoprotein kunogona kudzikisira iyo fusion yesero uye kusunga pakati pehutachiona uye inomiririra cell cell, uye kuumbwa kwesero muviri kuwirirana kudzima kudzokorodza kweMoLV kuitira kuti ibatsire iyo cytostatic chiitiko
Ndeapi mashandiro eMulberry Leaf Bvisa 1-Deoxynojirimycin?
Mulberry Leaf inoonekwa seyakanaka miriwo muChina yekare yekurwisa-kuzvimba, inotsigira kurwisa kuchembera nekuchengetedza hutano. Mulberry shizha rakapfuma muamino acids, vitamini C uye antioxidants. Pakati pezvinhu izvi, zvinonyanya kukosha ndezveRutoside uye DNJ (1-Deoxynojimycin), Ongororo ichangoburwa yeChinese yakaratidza Rutoside uye DNJ inoshanda mukugadzirisa mafuta eropa, kuenzanisa BP, kuderedza glucose yeropa, uye kuwedzera metabolism.
Ndeipi mhedzisiro yeMulberry Leaf Extract 1-Deoxynojirimycin paRopa Lipid Profiles muVanhu?
Mulberry mashizha akapfuma mu1-deoxynojirimycin (DNJ), iyo yakakosha pakuchengeta hutano hwakaenzana α-glucosidase. Isu takamboratidza kuti DNJ-yakafuma mulberry shizha dhiza rinodzvinyirira kukwirisa kwepostprandial ropa glucose muvanhu. Chinangwa chechidzidzo ichi chaive chekuongorora mhedzisiro yeDNJ-yakafuma mulberry mashizha mushizha pamaplasma lipid profiles muvanhu. Yakavhurika-chitambi, imwechete-yeboka kudzidza kwakaitiswa mune gumi zvidzidzo zvine yekutanga serum triglyceride (TG) nhanho ≥200 mg / dl. Zvidzidzo zvakamedza macapuleti ane DNJ-akapfuma mulberry shizha rinobviswa pa12 mg katatu pazuva zuva nezuva vasati vadya kwemavhiki gumi nemaviri. Zvatakawana zvakaratidza iyo TG nhanho mu serum yakadzikiswa zvine mwero uye iyo lipoprotein mbiri ine shanduko inobatsira mukutevera gumi nemaviri-vhiki manejimendi eDNJ-akapfuma mulberry mashizha emashizha. Hapana shanduko yakakosha muhematological kana biochemical parameter akaonekwa panguva yekudzidza; hapana zviitiko zvakashata zvine hukama neDNJ-yakafuma mulberry shizha dhizai yakaitika
Chii chinonzi Fenugreek Mbeu Bvisa?
Zvirinani kuzivikanwa muWest se curry spice, Fenugreek inotsigira hutano nhanho ye testosterone, ichipa zvakaratidza bhenefiti mune yekurovedza muviri - uye yekurara. Iyo fenugreek mbeu inoshandiswa zvakanyanya segalactagogue (inogadzira mukaka mumiririri) navanamai vanoyamwisa kugadzirisa mukaka wemukaka. Zvidzidzo zvakaratidza kuti fenugreek chinhu chinogonesa mukaka wemukaka kugadzirwa. Fenugreek yave ichishandiswa kwemazana emakore kubatsira kuchengetedza yakajairwa glucose level uye kuenzanisa shuga yeropa. Ongororo ichangoburwa yemakiriniki yakaratidza Fenugreek inokurudzira glucose-inoenderana nekuchengetedzwa kweinsulini nepancreas. Zvidzidzo zvakaratidza hypoglycemic zvivakwa zveFenugreek greek mbeu, kureva. Inogona kubatsira kuchengetedza zvakajairika shuga zveropa, uye zvinobatsira mukuderedza uremu uye kurasikirwa kwemafuta zvakare. Mabasa eFenugreek mbeu dzinobviswa sezviri pazasi:
• Chinja metabolism
• Suppot inowedzera Male stamina, kutyaira uye kuita
• kuwedzera mabhenefiti ekushanda kunze
• Kuvandudza kugadzirwa kwemukaka mumadzimai anoyamwisa
• Ita kuti pancreatic ishande
• Chengetedza mwero weropa glusoce
• Batsirwa kuhutano hwechiropa
Chii chinonzi Furostanol saponins?
Furostanol saponins aripo muzvirimwa zve fenugreek saponin, zvinobatsira kuchengetedza yakanaka testesterone nhanho nekumutsa muviri kuburitsa luteinizing mahormone uye dehydroepiandrosterone.Iyo yanga ichishandiswa mukuwedzera simba revanhu rechisimba, kutyaira, & kuita, uye kuwedzera mhasuru kukura Chidzidzo chazvino chinoratidza kuti zvikamu zvacho zvikuru, Furostanol saponins, yaimbove diosgenin saponin, inoita chinhanho chakakosha mune chinoshanda chinhu.
Aerobics vatambi vakaona kuti mushure mekutora fenugreek saponins, chishuwo chavo chave chagadziriswa. Icho chinoonekwa sechinhu chakanaka kune avo vanhu vanoda kuwana huremu, inogona kushandiswa seMuscle Building Supplements.Chidzidzo chaJune 2011 kuAustralia Center yeInterative Clinical neMolecular Medicine chakawana kuti varume vane makore 25 kusvika 52 avo akatora fenugreek dhonza kaviri pazuva kwevhiki nhanhatu akawana 25% yakakwira pamiyedzo yekuyera libido mazinga pane avo vakatora Placebo. Zvakare, test. yakasimudzirwa neinopfuura 20%.
Chii chinonzi 4-hydroxyisoleucine?
4-hydroxyisoleucine isiri-protein amino acid, inowanikwa mune fenugreek zvirimwa, kunyanya mumbeu yefenugreek, ine simba rekusimudzira iyo insulin secretion. Uye zvakare, 4-hydroxy-isoleucine inogona kusimudzira iyo creatine inopinda mumaseru maseru. Inogona kuvandudza masimba etsandanyama uye kuonda kwemhasuru, uye kuwedzera simba uye saizi yemaseru emasuru.
"Ndeapi masevhisi aunogona kupa?"
Kuti umise kubatana kwenguva refu nevatengi, saka isu tinokupa iwe zvakanakisa zvese Pamberi-Kutengesa uye Mushure mekutengesa Sevhisi.
1. Chishoma chemienzaniso yemahara;
2. Strong technical technical inotsigira kubva kufekitori yedu uye nenzvimbo yekutsvagisa;
3. Taura mhinduro dzakakodzera kuchirongwa chako.
4. Yakazara seti yehunyanzvi dhata, seCoA, MoA, MSDS, Maitiro Kuyerera, Kwayedza Reports, nezvimwe.
Zvakadii neiyo Yekupedzisira-Kutengesa Sevhisi?
1. Ipa ruzivo rwekutumira kwako mu-nguva;
2. Rubatsiro pakuchenesa tsika;
3. Simbisa chinhu chisina kugadzikana chakagamuchirwa;
4. Yakakwana chigadzirwa chekutevera system uye sevhisi;
5. Dambudziko remhando yezvinhu rinotarisirwa nesu